tamin’ny lalam-pirenena faha fito, PK 86 + 800, teo Ambohimandroso, Distrikan’Ambatolampy. Ny sabotsy maraina teo, tamin’ny 4 ora sy sasany maraina mantsy no nifandona ilay fiara sy sarety. Avy any atsimo hihazo an’Antananarivo ilay fiarakodian’ny kaoperativa “Tanjona” no nifanehitra tamin’ilay fiaran’ny tantsaha. Araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena, naratra mafy ireo roalahy kely mpandroaka ombin-tsarety, samy avy ao Tsarahonenana Ampitatafika. Nentina nihazo ny toeram-pitsaboan’ny distrikan’Ambatolampy avy hatrany izy roalahy ireo. Naratra mafy ihany koa ireo omby. Fahasimbana goavana ihany koa no nahazo ilay fiara sy ny sarety. Ny zandary avy ao Ambohimandroso no nandray an-tanana ny raharaha. Efa nisy ny fanentanana hatrany mba hisy jiro
mpitari-dalana amam-polony metatra mialoha ny sarety, amin’ny alina.